नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि दिल्ली चकित, जुन दिल्लीले नेपालले यस्तो गर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन ! « गोर्खाली खबर डटकम
नेपालको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि दिल्ली चकित, जुन दिल्लीले नेपालले यस्तो गर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन !
तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक शनिबार पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ ।
नेपालमा नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जुन गतिमा अगाडि बढ्यो, त्यसबाट दिल्ली पूरै चकित बनेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भएपछि नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले कुराकानीका क्रममा यी प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए, ‘नेपाललाई किन यस्तो हतारो ? यतिका वर्षसम्म हल नहुँदा हुने, अहिले यस्तो तीव्र गतिमा किन ?